Inyaniso yokuba ubisi kunye nayo yonke into eyenzekayo kuyo, ngokomthetho, ilungileyo kumntu, sele kuthethiwe kwaye kuthethathethwano. Yaye malunga nokuba zininzi iimveliso zobisi zihlukeneyo, asiyi kuthetha ngokukhawuleza. Kodwa ukusebenzisa kuhle, ulonwaba luyolonwabo. Kwaye kulungile, ukuba unako ukudibanisa.
Kuhle ukuba wena kunye nabantwana bakho ungumxhasi weemveliso zobisi. Nangona kunjalo, abantwana abaninzi banconywa ebisi ngeentlobo zontanga kunye ne-yogurt ephilileyo. Umntwana wethu ungumntwana othandekayo kwaye akafuni ukuba nobisi. Kwaye thina ekhaya senza ubisi obumnandi kakhulu, kwaye utshintshe ingqondo yakhe. Kukho nawuphi na, i-milkshakes ihamba ne-bang! Iingcamango ezinxilisayo zobisi azinakuphela.
Nangona kunjalo, awukwazi ukuwela ngaphesheya apha. Konke kulungile-ukuba ngokumodareyitha. Ukwenyuka kweeshukela kwimveliso yeebisi kunciphisa ukusetyenziswa komzimba. Ngelishwa, awukwazi ukwenza ngaphandle kweshukela xa ulungiselela ubisi beebisi. Kodwa ndifuna ukuzama ukunciphisa umxholo wayo ubuncinci. Xa kufuneka senze ukhetho phakathi kweepips nokuhlafuna iipeseki, ukutyiswa kwebisi kubonakala ngathi kukukhetha okulungileyo. Kwaye sikulungele into ethile, sinika iilekese ezinomnandi esikhundleni seesekese okanye i-crackers nge-flavourings: izilwanyana ezinamaqabunga, ubisi lobisi kwiimbiza eziqhakazile, ubisi olucolileyo, ubisi obumnandi buzongqamana nezixhobo ezinobungcali.
Enyanisweni, kulula ukuba nje uye esitolo uze uthenge i-dessert yobisi yemveliso. Ukuba ufuna ukuzithobela ngokwakho, akukho mntu uya kukukhanyela. Ukuba uya kunyanga umntwana wakho, qwa lasela uluhlu lwezithako, uxhobile ngolwazi kunye nokunyaniseka okunempilo. Unokuya kwi-cafe uze uziphathe ngokubhekisele kwi-milkshake, i-cream, ikhekhe ekhethiweyo. Kodwa kukho enye inketho: ukwenza i-masterpieces kunye ne-"milks" ehle kakhulu ekhaya. Ewe, ndimele ndiyike! Kodwa ungasebenzisa iimveliso zobisi, ezihluke kakhulu kwizinto zendalo. Kwaye okubaluleke kakhulu - ukuwadla ngokutsha, ngokukhawuleza emva kokupheka. Ukongezelela, ngelixa unyanga umntwana, unako ukuzisa umkhiqizo onobumnandi obusondeza kwiimfuno ezithile.
Ukupheka ubisi lobisi ngokukhawuleza
Ngokuxhomekeka kwisidingo, khetha umxholo we-fat (imveliso, i-cottage cheese, i-kefir, ukhilimu omuncu). Ukuzimela ngokuzimeleyo inani leswekile elisetyenzisiweyo. Kubantwana, idosi kufuneka ibe yinto encinci - kutheni ufanele uzijwayelele ukutya okunomsoco? Ukulinganisa - enye yeyona nto impawu ebaluleke kakhulu yokutya, kubandakanywa ne-gastronomy. Ukuba usebenzisa i-jam okanye ubusi, ushukela kufuneka ungabandakanywa.
Ubisi. Unako ukwenza i-cocoa rhoqo ebisi. Ungasebenzisa umxube ogqityiweyo. Okanye uzipheke ngokwakho, ungeze izithako ezifunekayo (i-cocoa, ushukela), uvuselela kakuhle kwaye utshayele umlilo. Ngokuqinisekileyo, akukho mntu uya kukukhanyela ukubetha umxube kunye nobisi kunye nesiraphu yesithelo. Kodwa yazi ukuba kungcono ukusela ubisi ngokwahlukileyo. Ngamanye amaxesha kuya kuhlanganiswa neziqhamo, kodwa kuthathelwa ingqalelo ukunyamezela. Ngeziqhamo, iimveliso zobisi ziyahambelana.
Kefir. Ukuba umntwana unqabe ngokupheleleyo ukuhlangabezana ne-kefir, faka i-jam encinci yegazi kwaye uyinikeze kwakhona. I-berry ye-berry stock instead of syrup is a good substitute.
Cottage shiese. I-Cottage cheese inokuncedwa ngeentlobo ezahlukeneyo zokugqoka: nge-ukhilimu omuncu kunye noshukela, kunye ne-jam (utywala kunye neziqhamo ezicatshulwa), kunye ne-cocoa, kunye neziqhamo ezintsha kunye namajikijolo.
Ukhilimu omnandi. Isebenza njengengubo emnandi yokudla isaladi isaladi. I-kroti idibanisa emacaleni amancinci, ufefe iswekile, uthele ukhilimu omuncu uze udibanise. Amehlo ahle, namazinyo. Iimpawu ezininzi eziqhelekileyo, eziqhelekileyo ekukhetheni izaqathe eziphekiweyo zisuka kwisobho, zithanda le saladi! Ingakhonzwa njengesitya sokuqala, ngaphambi kokuya esikolweni okanye esikolweni.
Yoghurt. Nangona eyaziwa ukuba i-yogurt yangempela yeBulgaria ayiyona into emnandi, abantwana bathanda iimveliso ze-yoghurt nezizaliso zezizaliso. Yaye la ma yogurts ayenziwanga kwi-bhotile okanye kwimvu - kodwa kubisi lweenkomo. Ngokwemvelo, ngokudibanisa ukhilimu, ubisi obumhlophe, ibhaktheriya ekhethekileyo kunye ne-Bulgarian wand. Asikho apha ukuxoxa ngengxaki ye-yogurt "yokuphila". Masithi nje ukuba i-living and yogurt ngokusemgangathweni kufuneka ithathelwe ingqalelo njengabo banesimo sekhefu kwiintsuku ezingama-2-3. Oku, njengomthetho, okubizwa ngokuba yi-yoghurts yokusela. Basenokuthulula isidlo sasekuseni esomileyo ngaphambi kokuba baphume ekukhanyeni - indlela esheshayo yokunciphisa isazela sikamama, njengabaninzi bezindlukazi.
Amanqindi amachiza, amaninzi amnandi kunye neefasta. Olunye ulungelelaniso endleleni yokuphila ngendlela enempilo. Iibisi kunye neesisindo ngumxube we-kottage ushizi, ukhilimu, ngamanye amaxesha ibhotela kunye noshukela. Zinikezelwa kumntwana njenge-dessert, enzulu phantsi enethemba lokuba ngexesha elifanayo bazisa inzuzo kumzimba. Konke kuxhomekeke kwinani lala manqaku angentla. Kucacile ukuba i-curd cheese "abalimi" kunye ne-vanillin okanye iinqabileyo kuya kuba luncedo kunokuba i-high-calorie glazed glasi kwi-tsholatshi kunye nezinye izithako ezithandekayo. Ukuba ufuna ukukhetha isilinganisi sobungakanani, nciphisa ubuchule bentsana yakho ukucinga ngeefestile ixesha elide, ukukhupha nantoni na ebonakala ngathi i-candy packaging.
Kuyathandwa kakhulu ngoku kwi-dessert ushizi kunye nembewu ye-poppy kunye nokufakelwa kwe-gelatinous eninzi. Kwakhona, yenza ukhetho malunga nomkhiqizo, osoloko ulawulwa ngumxholo we-kottage cheese, kwaye awunakongeza amnandi. Ngokubhekiselele kumaninzi amnandi alandela imigaqo efanayo. I-cottage cheese pastes ekulinga i-cellophane i-sausages iya kuphinda ihlasele i-dessert yobisi. Abantwana abaninzi bayamkela ngenyameko isipho esinjalo se-snack.
Ubisi kunye nokukhahlela iipuddings kunye nama-creams. Kakade, unokuyithenga, okanye unokuyenza. Ukwahlukana, kwakhona, kukukwazi ukutshintsha ukulinganisela, umgangatho, ubuninzi kunye nomxholo we-fat of the products.
Ice cream. Ndifuna ukuthetha nge-ice cream ixesha elide kwaye ndiphefumlelwe. Uninzi lwezinto ezintle kakhulu ezinkumbulo ezinobuntwaneni zidibene nencam Kwaye umntu, ukusetyenziswa kwakhe ngokweqile kwaba yimbangela ye-angina ngokukhawuleza. Kukho nawuphi na, i-ayisikrimu ithandwa kakhulu, mhlawumbi nokuba yindawo ekhethiweyo yobisi. Kwaye ngamanye amaxesha - kunye nokufakelwa kwesondlo esipheleleyo kwiimeko ezizodwa. Khumbula kaninzi kangakanani owamkela kwi-resort, okanye ngethuba lokuzonwabisa, okanye kwisesksi kumntwana wakho, ukumthenga "eglasini" okanye "ngentonga." Kwaye kukuvuyisa ukusebenzisana ngokukhawuleza ngeepuni, ehleli e-cafe ehlobo, kwaye ubukele i-ice cream edibanisa ibhola ngokukhawuleza. Ngama-blueberries, i-almonds, i-rum, i-coke, nantoni na. Unokwenza ice cream ekhaya. Okanye bumnandi i-ice cream "emhlophe" esitolo. Into ephambili - ukuba i-ayisikrimu yayisandul 'ukutsha, ukutya - ukuphumla, kunye neemeko - ezimangalisayo!
Kanye nomntwana ungalungiselela isidlo sebisi ebandayo, esiya kuba sesimnandi, kwaye sinomhlwa, kwaye sinomsebenzi. Le recipe imdala kakhulu kwaye idlulile ukuvavanya kwexesha kwii-mistress zeenkulungwane ezidlulileyo. Kufuneka udibanise i-cottage ushizi ngekhilimu omuncu, ungeze iswekile, ivenkile. Ukusuka kulo mxube, bumba izibalo ezahlukeneyo okanye uzifake kwi cookies. Gcoba ngezithelo ezicandiweyo. Emva koko ufake efrijini okanye kubanda ukuba ulungise umlo. Fumana kunye nokuzonwabisa - kunye nokuhlalisa!
Ubisi bugubha. I-milkshake enomdla kakhulu inokwenziwa lula ekhaya, kunye nabantwana. Unokubakholisa ubomi bentlalo kunye nomntwana, ngokukhawuleza utywilise ubisi kwiiglasi ezihlotshisiwe. Intlobo enkulu kunye neentlobo ezahlukeneyo. Bakha kancinci iholide yezingane, banike, ngexesha elifanayo, bafana nale nkundla. Uninzi lweenkcazelo zingalungiswa ngemizuzu embalwa, zenziwe zodwa okanye zihlangene nomntwana omhle amagama.
Nantsi iresiphi elula yokubambisa i-milkshake enokuthi umntwana wakho apheke. Sidinga 150 ml yobisi, 30 ml yesitrophu okanye isiraphu ye-chocolate kunye ne-yolk yolanga eli-1. Hlanganisa zonke izixhobo ze-cocktail kwi-shaker okanye i-mixer kwisitya esiphezulu nesincinci. Dlulela kwigalagi ende. Ncipha nge-cinnamon yomhlaba. Into ephambili kukuba uhlolisise kakuhle amathuba akho kunye nesisu sakho sabantwana. Khumbula ukuhambelana ngokuhambelana nobisi kunye nezinye izithako. Amava abonisa ukuba imilinganiselo apha ihlala yimeko esemgangathweni.
Iidyuzi zeeshizi. IDessert yisitya sokugqibela. Kodwa ingaba mnandi okanye hayi, kufike kuwe. Abanye bakhetha i-dessert, engundoqo okanye inxalenye kuphela yesosi. Ezi zikhuni zibizwa ngokuba yi-cheese desserts. Kodwa ubuninzi beentshizi zenziwe ngobisi! I-Cheese ngokwayo iyakunikwa i dessert. Ngokukodwa iintlobo zayo ezifana ne-brie, i-camembert kunye neentshizi ezihlaza okwesibhakabhaka ezinobumba obuhle (i-roschore, i-gorgonzola, i-for blur). I-Italian cream cream I-Mascarpone inxalenye ye-dessert edibeneyo, eyona edumileyo yinto ebizwa ngokuba yi-tiramisu. Ukongeza kwintsimi efanelekileyo, i-tiramisu iyahlukaniswa nokuqukethwe kwayo kwekhalori ephezulu, ngoko gcina le engqondweni. Kodwa ubuncinane kanye kanye ebomini bakho ufanele ufanele umazi!
Ubisi ngotywala. Umxholo onzulu kwaye ungenamntwana! Kodwa ukuba usukile ukuyeka ukuncelisa, kwaye igama elithi "ubisi" alinakubangela ukuxinezeleka kwangemva kokuphumayo, kutheni ungahambi ngaphandle kwidolophu yasebusuku kunye nabathandekayo bakho, abahlobo kunye nokungaziseleli (ngokuba igama "ukuphoswa" apha ngokuqinisekileyo alifanelanga) elihle ubisi. Eli xesha lidakwa. I-Whiskey kunye nobisi ziyahambelana! Akunjalo ekhitshini labantwana, kunjalo. Uhambelana nobisi kunye notywala, kuquka i-mint. Ezi nkwenkwezi zipholile, zilula ukuqonda ngesisu esingenalutho (ukuba kukho imfuneko enjalo).
Ukuba akukho zichaso, ubisi luncedo kubantu abadala kunye nabantwana. Ukuba abantu baqonda ukubaluleka kwe-calcium, iiprotheni kunye namavithamini emzimbeni, ngoko kunzima kubantwana abancinci ukuba bachaze. Indlela ephumelelayo yokuphuma kwintsiba iya kuba yileta yobisi, ikakhulukazi iphekwe nguwe. Thina, ekhaya senza ubisi obumnandi, sinikela ukholo lwethu kubisi. Into efanayo (nokuba bhetele) unokuyenza!
Izibonelelo zokutya kwisondlo somntu
Ziyingozi kwaye zizuze ushukela
I-Spirulina yokulahleka kwesisindo: ngaba kukho umphumo?
Ukucoca umzimba emva kweeholide
Iipropati ezisebenzayo zeziqhamo nemifuno
Indlela yokuba ngumbini ocacileyo
Umvuzo wesithethe "weShaba" kwintsebenzo engaqhelekanga
I-apricot pie ngamannuts
Ungatshintsha njani isimo sengqondo kwimicimbi yasekhaya, ukuze ubomi bube yinto eqhelekileyo
Ukukhishwa kwesikweletu kunye neebhanki
Ukukhanyisa iinwele nge-sinamoni
Ukuzilibazisa okusebenzayo kukubalulekileyo kunye neenzuzo
Iyintoni isiqingatha sam sesibini?
Nazi izinto eziza kuzisa inhlanhla kunyaka omtsha 2018
Buckwheat kunye anyanisi kwi-multivark
Umncintiswano wobugcisa ovela kwi-salon yomtshato "La Sposa De La Rosa"
Indlela yokugqoka iilesi: Imifanekiso ephezulu yehlobo ephezulu
U-Beyonce uqalile ukurekhoda idiski entsha